Jeremia 28 - Ny Baiboly
Jeremia toko 28
Adin'i Jeremia tamin'ny mpisorona amam-paminany - Ny amin'i Hananiasa.
1Tamin'izany taona izany ihany, dia tamin'ny niandohan'ny nanjakan'i Sedesiasa, mpanjakan'i Jodà, tamin'ny taona fahefatra, volana fahadimy: niteny tamiko teo an-tranon'ny Tompo, teo anatrehan'ny mpisorona sy ny vahoaka rehetra Hananiasa, mpaminany, zanak'i Azora, avy any Gabaona, nanao hoe: 2Izao no lazain'ny Tompon'ny tafika, Andriamanitr'Israely: Efa notapahako ny jiogan'ny mpanjakan'i Babilona. 3Roa taona sisa, dia haveriko amin'ity fitoerana ity ny fanaka rehetra tao an-tranon'ny Tompo, nalain'i Nabokodonozora, mpanjakan'i Babilona, avy amin'ity fitoerana ity, ka nentiny ho any Babilona. 4Ary hampodiko amin'ity fitoerana ity Jekoniasa, zanak'i Joakima, mpanjakan'i Jodà, mbamin'ny babo rehetra amin'i Jodà lasa tany Babilona, - teny marin'ny Tompo, - fa hotapahako ny jiogan'ny mpanjakan'i Babilona.
5Ary Jeremia mpaminany namaly an'i Hananiasa, mpaminany, teo anatrehan'ny mpisorona sy teo anatrehan'ny vahoaka rehetra, izay tao an-tranon'ny Tompo; 6ka hoy Jeremia mpaminany: Amena! Hataon'ny Tompo anie izany! Ho tanterahan'ny Tompo anie ny teny vao avy novinaninao, amin'ny famerenany avy any Babilona ny fanaky ny tranon'ny Tompo mbamin'ny babo rehetra, ho amin'ity fitoerana ity indray. 7Kanefa kosa henoy izao teny holazaiko eto ho ren'ny sofinao sy ny sofin'ny vahoaka rehetra izao: 8Ireo mpaminany teo alohanao sy talohako, hatramin'ny andro ela, dia efa naminany ady sy loza ary pesta, ho amin'ny tany maro amam-panjakana lehibe. 9Ary izay mpaminany maminany fiadanana kosa, dia ny fahatanterahan'ny tenin'izany mpaminany izany no hahafantarana azy ho mpaminany tena nirahin'ny Tompo marina tokoa.
10Tamin'izay, nalain'i Hananiasa mpaminany ny jioga teny am-bozon'i Jeremia mpaminany, ka notapahany. 11Sady hoy Hananiasa, teo anatrehan'ny vahoaka rehetra: Izao no jiogan'i Nabokodonozora, mpanjakan'i Babilona, hiala eny am-bozon'ny firenena rehetra, raha afaka roa taona. Dia lasa niala Jeremia mpaminany.
12Nony efa notapahan'i Hananiasa mpaminany ny jioga teny am-bozon'i Jeremia mpaminany, dia tonga tamin'i Jeremia, ny tenin'ny Tompo, nanao hoe: 13Mandehana hianao, milazà amin'i Hananiasa hoe: Izao no lazain'ny Tompo: Jioga hazo no notapahanao, fa jioga vy kosa no nataonao hasolo azy. 14Satria izao no lazain'ny Tompon'ny tafika, Andriamanitr'Israely: Asiako jioga vy ny vozon'ireo firenena rehetra ireo, mba hanekeny an'i Nabokodonozora, ka dia hanaiky azy izy ireo efa nomeko azy mbamin'ny biby any an-tsaha.
15Dia hoy Jeremia mpaminany tamin'i Hananiasa mpaminany: Henoy, ry Hananiasa: Tsy nirahan'ny Tompo hianao, ka nataonao izay itokian'ity vahoaka ity amin'ny lainga. 16Koa izao no lazain'ny Tompo: Indro esoriko tsy ho eto ambonin'ny tany hianao, ka amin'ity taona ity ihany, dia ho faty hianao, satria fiodinana amin'ny Tompo no notorinao. 17Dia maty tamin'izany taona izany ihany, tamin'ny volana fahafito, Hananiasa mpaminany. >